Usizo kwabaswele nobumnandi koweSolezwe eMashamplanez
UPhumlani Dube uzophatha uhlelo emcimbini weSolezwe eMashaplanez Lounge eChesterville eThekwini
Intatheli Yesolezwe | June 21, 2022
SEKUBALWA izinsuku luqale uchungechunge lwemicimbi yobumnandi yokugubha iminyaka engu-20 Isolezwe lasungulwa.
NgeSonto, Isolezwe lizoqala lolu chungechunge lwemicimbi eMashamplanez Lounge, eChesterville, nalapho kuzobe kubhiyozwa khona kubongelwa leli phephandaba ngokuqeda le minyaka laba khona.
Abahleli balo mcimbi kabathembisi nje ubumnandi kuphela kulo mcimbi kepha bathi kuningi okuzohlonyulwa ngabazobe bewuhambele.
Owengamele ezokumaketha kwiSolezwe, uPhumi Mkhize, uthe abantu kufanele bazogubha iminyaka ewu-20 iphephandaba lasungulwa futhi bajabule ngohambo eselilihambile.
“Sifuna ukuthokoza nabafundi bethu futhi sifuna nabo bahlomule kule micimbi esizobe sinayo, ngakho siyanimema bafundi ukuba nibe nathi kulo mcimbi okuzongenwa mahhala kuwo. Sizobe siphethe indathane yemiklomelo nezipho ngakho ozobe engekho uzophuthelwa impela,” kuveza uPhumi.
Njengoba Isolezwe ligubha le minyaka, uMhleli oMkhulu uKiki Ntuli, uthe iphephandaba lizosebenzisa le migubho ukushintsha impilo yabantu nokusiza abaswele.
“Ngalolu suku ngeke sigxile ebumnandini kuphela kepha kunemindeni engu-20 esiyikhethile esizoyihlomulisa ngokuthize nesithemba ukuthi kuzowenza umehluko empilweni yawo. Sibambisane nabaxhasi bethu ukulekelela le mindeni eyakhele khona eMashamplanez lapho sizophinde sibhiyoze nayo nani bafundi bethu enizobe nikhona.
““igubha le minyaka ngenxa yenungakho sifuna ukujabulisa ninangobumnandi nangezipho esizobesiziphethe. Phumani ngobuninginizojabula nathi,” kusho uKiki.
Umnikazi wendawo uBonga Shange uthe abantu bangafika nama-cooler box. Ukungena ne-cooler box enotshwala obusemakanini kubiza uR150, ebese wengeza uR50 uma kunebhodlela likagologo. Uveze nokuthi izimoto ezingu-50 zokuqala ezizofika kulo mcimbi zizowashwa mahhala njengoba kunanendawo yokuwasha izimoto. Uthe ezokuphepha zizobe ziqinile ukuqiniseka ukuthi abantu bajuxuza ngokukhululeka ngakho izikhali kazivumelekile kulo mcimbi.
Basazomenyezelwa abazonandisa kulo mcimbi uhlelo lwawo oluzobe luphethwe nguPhumlani Dube.
UDJ Dumile ungomunye wabazonandisa kanti abanye basazomenyezelwa.